. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ယုံကြည်မှုများ
ကျမက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တဦးဖြစ်လို့ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတဲ့ တရားတော်တွေ အကျင့်အကြံတွေက သံသရာက လွတ်မြောက်ရာ လမ်းကြောင်းဆိုတာကို ယုံကြည်ပါတယ် .. ကံဆိုတာ လူက လုပ်တာဆိုတာကိုလည်း ယုံတယ် .. ကောင်းတာ လုပ်ရင် ကောင်းကျိုးခံစားရမယ် .. ကိုယ့်စေတနာက တချိန်ချိန်မှာ အကျိုးပေးမယ် .. စတာတွေကိုလည်း ယုံကြည်ပါတယ် ..
ပြီးတော့ မေတ္တာတရား .. မိဘတွေ ကိုယ့်အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာ မေတ္တာတွေက အနှိုင်း မရှိဘူး ဆိုတာကို ယုံကြည်ပါတယ် .. ကျမ ဘယ်လို အခြေအနေပဲ ရောက်နေ ရောက်နေ အဖေနဲ့ အမေကတော့ ကျမအပေါ် မေတ္တာလျော့သွားမှာမဟုတ်ဘူး .. ကျမ ဘယ်လို အပြစ်တွေပဲ လုပ်လုပ် အမြဲတမ်း ခွင့်လွှတ်မှာပဲလို့လည်း ယုံပါသေးတယ် .. လူသားတွေထဲမှာ ကျမ အယုံကြည်ဆုံးက ကျမ မိဘ ပါပဲ ..
ကျမ ခုချိန်ထိ ကျမအပေါ် မုန်းတီးတဲ့လူ .. ယုတ်မာ ကောက်ကျစ်မယ့်လူနဲ့ မဆုံတွေ့ဘူးပါဘူး .. ကျမ တွေ့ဆုံ ခင်မင် လာသမျှ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ ချစ်သူ ခင်သူ အားလုံးက ကျမအပေါ် အကုန်ကောင်းကြတယ် .. လူကောင်းတွေနဲ့ပဲ ဆုံတွေ့ဘူးပါတယ် .. သူ မကောင်းဘူးလို့ ပြောရလောက်တဲ့သူ ကျမ မှာ မရှိပါဘူး .. အဲဒါက ကျမ နေ့တိုင်း သတိရတိုင်း မေတ္တာပို့ ရွတ်ပါတယ် .. တခါတလေ လုံးစုံများစွာ သတ္တ၀ါ စတဲ့ မေတ္တာသုတ် မေတ္တာပို့ကို ရွတ်ပါတယ် .. တခါတလေ "၃၁ ဘုံ ကျင်လည်ကြကုန်သော လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါ အားလုံး ကျန်းမာ ကြပါစေ ချမ်းသာကြပါစေ" လို့ပဲ မေတ္တာပို့ပါတယ် ..
အလုပ်ဝင်စကတည်းကလည်း လူကြီးတွေရဲ့ မျက်နှာကို မှန်းပြီး မေတ္တာပို့လေ့ရှိပါတယ် .. ဒါကြောင့်လည်း ကျမ အလုပ်မှာ မပင်မပန်းပဲ အကုန်အဆင်ပြေသလို လူတိုင်းနဲ့လည်း တည့်တယ် .. ကျမစိတ်ထဲမှာ စွဲနေတာပေါ့နော် .. ဆိုလိုချင်တာက မေတ္တာတရားက အစွမ်းထက်ပါတယ် .. အဲဒါကို ယုံကြည်ပါတယ် ..
၀ဋ်ကြွေးကိုလည်း ယုံကြည်သလို ကြောက်လည်း ကြောက်ပါတယ် .. ကိုယ့်မှာသာ ၀ဋ်ကြွေး ရှိနေမယ်ဆို ကြေအောင် ဆပ်ရပါမယ် .. ဒါမှလည်း မျှတမယ်မလား .. ကျမတို့ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားတောင် ဘုရားဖြစ်ပြီးတာတောင်မှ ၀ဋ်ကြွေးကို ရှောင်လို့ မရခဲ့ပါဘူး ..
နောက်တခုက ရေစက်ပါ .. ရေစက်ရှိခဲ့လို့ ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတယ် .. အဲဒီအချိန်မှာ ခင်မင် ပျော်ရွှင်ချင်လည်း ခင်မင် ပျော်ရွှင်နေမယ် .. မုန်းတီးချင်လည်း မုန်းတီးနေမယ် .. ဒါပေမယ့် ရေစက်ရှိနေသေးသရွေ့ ခွဲချင်လည်းပဲ ကွဲကွာဦးမှာ မဟုတ်ဘူး .. ရေစက်ကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုပဲ မခွဲနိုင်ပါစေ ကွဲကွာကြရမှာပဲ ..
စိတ် တန်ခိုး ကိုလည်း ယုံကြည်ပါတယ် .. စိတ်သာရှိရင် ဆန္ဒသာရှိမယ်ဆိုရင် အရာရာကို အောင်မြင်အောင် ကျော်လွှားနိုင်မယ် လို့လည်း ယုံသေးတယ် .. မရနိုင်ဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး .. တကယ် မရခဲ့ဘူး မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ စိတ်အား မထက်သန်လို့ပါ .. ကိုယ့်မှာ ယုံကြည်ချက်ရှိမယ်ဆိုရင် ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ ယုံပါတယ် ..
ပန်းရင့် တဂ်လို့ ရေးတဲ့ ကျမရဲ့ ယုံကြည်တာလေးတွေပါ ..း))
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/26/2009 11:36:00 PM
အိမ်ကို သတိရလို့ ရေးတဲ့စာ
m for & မ for